Valizy roa natsipy tamin'ny valizy
Valizy roa Cast Trunnion Ball Valve novokarin'i CEPAI no ampiasaina hanakanana na hampifandraisana ilay mpanelanelana amin'ny fantsona. Misafidiana Two Piece Cast Trunnion Ball Valve amin'ny fitaovana samihafa dia azo ampiasaina amin'ny rano, etona, solika, gazy liquefied, gazy voajanahary, gazy, asidra nitrika, karbamidà ary mpanelanelana hafa.
Valizy roa nopetahana valizy namboarina
Valve roa sandoka trondro namboarina novokarin'ny CEPAI no ampiasaina hanakanana na hampifandraisana ilay mpanelanelana amin'ny fantsona. Misafidiana Two Piece Forged Trunnion Ball Valve amin'ny fitaovana samihafa dia azo ampiasaina amin'ny rano, etona, solika, gazy liquefied, gazy voajanahary, gazy, asidra nitrika, karbamidà ary mpanelanelana hafa.
Volo baolina telo natsipy
Three Piece Cast Trunnion Ball Valveproduced by CEPAI no tena ampiasaina hanakanana na hampifandraisana ilay mpanelanelana amin'ny fantsona. Safidio ny Three Piece Cast Trunnion Ball Valve amin'ny fitaovana samihafa dia azo ampiasaina amin'ny rano, etona, solika, gazy liquefied, gazy voajanahary, gazy, asidra nitrika, karbamidà sy mpanelanelana hafa.
Volo baolina telo namboarina hosoka telo
Valve telo vy sandoka trongnion novokarin'i CEPAI no ampiasaina hanakanana na hampifandraisana ilay mpanelanelana amin'ny fantsona. Safidio ny Three Piece Forged Trunnion Ball Valve amin'ny fitaovana samihafa dia azo ampiasaina amin'ny rano, etona, solika, gazy liquefied, gazy voajanahary, gazy, asidra nitrika, karbamidà ary mpanelanelana hafa.
Valizy fanaraha-maso savily vy
Cast Swing Check Valve novokarin'i CEPAI dia ampiasaina matetika hanakanana na hampifandraisana ilay mpanelanelana amin'ny fantsona. Safidio ny Cast Swing Check Valve amin'ny fitaovana isan-karazany azo ampiasaina amin'ny rano, etona, solika, gazy liquefied, gazy voajanahary, gazy, asidra nitrika, karbamida ary mpanelanelana hafa.
Valve fanaraha-maso fananganana vy sandoka
Forve Piston Check Valve novokarin'i CEPAI dia ampiasaina matetika hanakanana na hampifandraisana ilay mpanelanelana amin'ny fantsona. Safidio ny forged Piston Check Valve amin'ny fitaovana samihafa dia azo ampiasaina amin'ny rano, etona, solika, gazy liquefied, gazy voajanahary, gazy, asidra nitrika, carbamide ary fitaovana hafa.
Valizy fanamarinana kapila indroa
Dual Check Valve novokarin'i CEPAI dia ampiasaina matetika hanakanana na hampifandraisana ilay mpanelanelana amin'ny fantsona. Misafidiana Dual Valve Valve amin'ny fitaovana samihafa dia azo ampiasaina amin'ny rano, etona, solika, gazy liquefied, gazy voajanahary, entona, asidra azota, karbamidà ary mpanelanelana hafa.
Valve vy vy vy
Cast Globe Valve novokarin'i CEPAI dia ampiasaina matetika hanakanana na hampifandraisana ilay mpanelanelana amin'ny fantsona. Safidio ny Cast Globe Valve amin'ny fitaovana samihafa dia azo ampiasaina amin'ny rano, etona, solika, gazy liquefied, gazy voajanahary, entona, asidra nitrika, karbamida ary mpanelanelana hafa.
Ny Fordge Globe Valve novokarin'i CEPAI dia ampiasaina matetika hanakanana na hampifandraisana ilay mpanelanelana amin'ny fantsona. Misafidiana Fordge Globe Valve amin'ny fitaovana samihafa dia azo ampiasaina amin'ny rano, etona, solika, gazy liquefied, gazy voajanahary, gazy, asidra nitrika, karbamidà ary mpanelanelana hafa.
Valin'ny vavahady FC, asongadin'ny fampisehoana avo lenta sy ny famehezana bi-directional, dia natao sy novokarina araka ny haitao mandroso indrindra eto an-tany. Izy io dia mifanila amin'ny valves vavahady FC izay manome fahombiazana tsara eo ambanin'ny serivisy avo lenta. Izy io dia azo ampiharina amin'ny lohataona solika sy gazy, hazo krismasy ary kenda sy mamono olona 5 000Psi ka hatramin'ny 20,000Psi. Tsy mila fitaovana manokana rehefa manolo ny vavahady valizy sy seza.